Awezinyoka, eyaziwa nangokuthi ezihuquzelayo, ikilasi kwezilwane, njengoba umthetho, phansi futhi ezilwaneni ezinomgogodla. Kuhlanganisa izidalwa ezifana izimfudu, izingwenya, izibankwa, izinyoka. emakhulwini amaningi eminyaka edlule, kuhlangene eziphila emanzini nasezweni, futhi manje kubhekwe ukuba seduze izinyoni. ezihuquzelayo Abaningi ahlukile kangangokuba isifundo alesi sigaba kuyoba mnandi ngisho sesayensi okhokhelwayo. Yiziphi ezihuquzelayo nezilwane? Izithombe namagama, kanye olunye ulwazi mayelana ngamunye efakiwe kulesi sihloko kuzokusiza ukuba akuqonde.
Mhlawumbe lezi zilwane nge igobolondo - edume kunazo izilwane, izilwane ezihuquzelayo. Izibonelo zihlanganisa kokubili ezweni futhi izilwane zasolwandle, batholakala emazweni amaningi emhlabeni wonke, futhi ngaphezu kwalokho, ngokuvamile ekhaya, ngisho nalabo abangebona a fan of big angavamile. Turtles yaba yiminyaka kwezigidi ezingu ezingamakhulu amabili edlule, kunenkolelo ukuthi zivela kotilozavrov lasekuqaleni. Kwaphela isikhathi eside nawo wakuthanda abantu - cishe hhayi izilwane eziyingozi ezibangela inhlangano nokuhlakanipha kuphela nokuzola. Turtle - kuphela ikilasi zempi. Ngaphakathi kwakheka bone, futhi ngaphandle izicubu Horny we sebuningini izakhi ngabanye, yokuxhuma amapuleti. Ufudu ukuphefumula emaphashini, namanzi - esebenzisa pharyngeal mucosa. Ngaphezu kwalokho, lezi zilwane ahlukile ngomqondo wokuthi aphila isikhathi eside kunanoma isiphi ezihuquzelayo. Amagama izimfudu endala zihlanganisa izinhlobo ezifana ibhokisi-like Caroline, omunye silwane abanjwe kwaba engu-130 ubudala. Nokho, endle kungenzeka kuzenze zibathinte nakakhulu izibalo, nje ukuthi laba bantu musa ukuwela ezandleni labacwaningi.
Mhlawumbe abantu abaningi, uma becela ukhumbule amagama ezihuquzelayo, izilwane, hhayi okungenani bathi ngalezi izibankwa. ezihuquzelayo UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki bahlala izihlahla baziwa sifihle sabo esiyingqayizivele. ibala lesikhumba Ungashintsha imvelo, ngokulandelana. Akumangalisi ukuthi Unwabu kugcinwa ekhaya. Kodwa kubalulekile ukuba acabangele ukuthi ngempela afune izinto ngenkani kwabanye ezihuquzelayo. Izithombe namagama - akukhona konke udinga ukufunda ngaphambi kokuthenga i isilwane angavamile. Okokuqala udinga ukuqonda izimo yeziboshwa - chameleon badinga terrarium enkulu nge izibuya evuthayo nezibani ekhethekile, Echibini elithile elincane futhi isihlahla, ne komoya okuhle, futhi njengoba feed ukuthenga izinambuzane.
Uhlu lwalabo ezihuquzelayo nezilwane, ngokuvamile indlu, ingasaphathwa iguanas. Waba zithandwa kakhulu eminyakeni yamuva, futhi nenombolo ezifuywayo lingalinganiswa ezinkulungwane. Kodwa anikholwa ulwazi gcina lokhu isibankwa akulula njengoba ikati noma inja. Iguana - isidalwa finicky kabani khona lidinga ukunakwa kanye nemali. Ukuze isibankwa kudinga yezinyoni okhethekile nge izimo ezikhethekile lokushisa, kanye nokudla fresh imifino, izithelo kanye namakhambi. Uma ukuhambisana nayo yonke imibandela, zingakhula le iguana ukuze amakhilogremu amahlanu! Isici eyingqayizivele salezi zidalwa iyona molt - ezihuquzelayo eziningi kuyashesha, futhi ngezinye izikhathi kuthatha isikhathi esingamasonto amabili.
Lezi zilwane - mhlawumbe ezihuquzelayo eziyingozi kakhulu futhi okwesabisayo. Amagama zingahluka - izingwenya, gavials, izingwenya, caimans, kodwa noma kunjalo kungcono kwesidalwa yisikhungo esisodwa. Bona savela ezihuquzelayo kunangendlela amamitha ayishumi nanhlanu ubude futhi aziwa okwesikhathi eside. Kwezazi baye bathola iminonjana izingwenya lasendulo e-Europe, i-Nyakatfo Melika, India nase-Afrika. Manje bangabafowethu usayizi nesizotha kakhulu, kodwa zisatholakala kwekulu ezihuquzelayo. Iningi izingwenya zokuphila eyenziwa emanzini, kokuyinikela kuphela kusukela amehlo, ikhala nezindlebe. Tail nezinyawo leWebhu ukwenza ukubhukuda lula, kodwa kude olwandle letingabhukusha zilwane ezihlala emanzini anosawoti kuphela. On izwe, akha izidleke, futhi ngezinye izikhathi nje okhethe bayofudumala. Amagama ezihuquzelayo nezilwane yaleli qembu zihlukile, kodwa lwengwenya kanye into ingwenya eyodwa - iyingozi kubantu. Awezinyoka ijubane Amazing kanye nomsila onamandla, yingakho umqulu kungadla abangaqaphile isihambi nemilenze noma ngisho nokuphila kwabo.
Lena ezihuquzelayo eyodwa ngaphezulu, esimagama aso laziwe kubo bonke. Yehluka nezinye ezihuquzelayo umzimba eside ukuma, ukungabi bikho kokukhanya nemilenze abhanqiwe, nezinkophe futhi indlebe umsele. Hlukanisa lezi zibonakaliso ingatholakala izibankwa, kodwa sisonke ndawonye - nje izinyoka. manje abantu bazi yohlobo lwazo ayizinkulungwane ezintathu. inyoka umzimba inezingxenye ezintathu - ekhanda, esifubeni kanye nomsila. Olunye uhlobo, e uhlobo oludala walondoloza nemilenze yangemuva. Abaningi babo anobuthi, kanye kanalchatymi noma ezimazombezombe amazinyo, aqukethe ketshezi enobungozi egeleza emuva kusuka nezindlala salivary. Zonke izitho zangaphakathi zihlukile ukuma side, futhi isinye engekho. Amehlo ihlanganisa i-cornea esobala, kwakhiwa amajwabu amehlo tho. Ngo izinyoka, ehola zokuphila kwansuku zonke, umfundi itholakala singatsheki, futhi ebusuku - thwi. Ngenxa indlebe enciphile ukuhlukanisa umsindo ophakeme kuphela.
Amagama ezihuquzelayo nezilwane zingase zishintshe kakhulu, naphezu kweqiniso lokuthi basonta lixuku efanayo. Ngokwesibonelo, izinyoka kukhona izinyoka, nakuba abanye bekholelwa ukuthi uwuhlobo ehlukile. Eqinisweni, lezi zilwane ayisondelene anobuthi. Noma kunjalo, yaphenduka inyoka. Basuke izimpawu izikali ekhululekile izimbambo ezinkulu. izinyoka Iningi lawo lihlala emizimbeni eduze kwamanzi kanye udle inhlanzi noma izilwane zasemhlabeni. Ngaphansi ngokuvamile, bayakwazi ukubamba isilwane esincane noma inyoni. Too ukugwinya isilwane asizingelayo siphila ngaphandle lokumbulala. Lapho ingozi ezihuquzelayo ukudlala ufile, futhi kuba khona okuhlaselayo secrete uketshezi nge nephunga ezingezinhle. Ukuze yokuzalanisa izinyoka ngifuna kweqembu yemifino udoti, umquba noma moss ezimanzi.
Lena ezihuquzelayo owaziwa kakhulu, okuyinto zivame ezihlobene igama uhlobo Komodo. Eqinisweni, ngabe zikhona zinhlobo ayisikhombisa, futhi bahlala hhayi kuphela eziqhingini ezithile. Nokho, bayehluka usayizi umxhwele - nje esifushane short-tailed ngamasentimitha amabili, futhi zingakhula bonke abanye ukuba imitha. Kodwa-ke, Komodo iyona enkulu kunazo zonke, nge isisindo elilodwa hundredweight isigamu namamitha amathathu ubude. Yingakho bebizelwa Dragons. Ngo izibankwa imilenze olukhuni futhi eqinile, kwemisipha umsila omude kanye izikali ezinkulu. ulimi Long nge yokuhlukanisa ekupheleni izibankwa ukuhogela. Umbala ikakhulukazi izimpawu, grey, isihlabathi futhi amathoni nsundu, nimbize izingane ezimthende nezimagqabhagqabha. Izibankwa bahlala emazweni afudumele aseNingizimu Central Asia, e-Afrika nase-Australia. Izindawo zingahlukaniswa ngamaqembu amabili. Okokuqala ukhetha ezomile ehlane ezindaweni kanye nezihlahla, kanye yesibili Kunenkolelo eduze amanzi emvula. Ezinye izibankwa abathanda ukuchitha isikhathi emithini.
It ezihuquzelayo, zinhlobo amagama okuhlotshaniswa ikhono eliyingqayizivele unamathele ngisho evele abushelelezi. Isigcilikisha esincane esingakwazi ukukhuphuka mpo ingilazi odongeni noma elenga ophahleni. Ukuze ugcine isisindo sakho, isibankwa ungagcina ngonyawo olulodwa. Lokhu kunjalo ikakhulukazi abantu amangazayo ezinkulungwaneni zeminyaka - bezama ukuzixazululela amakhono geckos Aristotle.
Isayensi yanamuhla has impendulo - kwi iminwe ezihuquzelayo babe emikhulu encane nge bristles mncane ukuthi amsize ahlale phezu sibonga ebusweni emthethweni nokuxhumana phakathi ama-molecule.
Izimpawu endaweni icebo. izimpawu kwendawo
Siyini isizathu futhi angawatholaphi kube? Iyini incazelo yegama elithi "ingxabano"?
Inganekwane ngezilwane ukubhala nengane yakho. Izindaba lokubhala ngezilwane - okwamanje sokudalwa
Indzaba "Winter Morning": izimiso yokubhala futhi izincomo
Isici ku isigaba Umfundi 1. Indlela ukubhala impendulo ingane esikoleni samabanga aphansi
Asparagus, isoya umkhiqizo. Calorie nezakhiwo asparagus.
Turntable - rarity eliphakeme kudivayisi ikhwalithi yomsindo